Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Booqo Beytlaxam Inta Aad Wali Tahay
dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • Wararka Falastiin • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Israel waxay dooneysaa dalxiisayaashu inay sii joogaan Hoteelada qaaliga ah ee Israel waxayna qorsheynayaan inay sharci daro ka dhigaan in lagu raaxeysto Hotelada Daanta Galbeed ee ku yaalo Beytlaxam. Qudus iyo Beytlaxam waxay isu jiraan dhawr mayl oo keliya, inta badan dalxiisayaashuna waxay booqdaan labada magaalo. Laakiin haddii Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Israa’iil ay waddo hayso, way adkaan doontaa in la seexdo Beytlaxam iyada oo qayb ka ah safar kasta.
Sharcigan cusub ayaa sharci darro ka dhigaya in dalxiisayaasha yimaada Israel ee qeyb ka ah kooxda dalxiiska ay ku hoydaan Daanta Galbeed. Amarka, oo la soo saaray bishii hore, wuxuu si gaar ah u xusay Beytlaxam wuxuuna u muuqdaa mid ku wajahan kooxaha Masiixiyiinta Xajka. Wax saameyn ah kuma yeelan doono dadka safarka ah.
In kasta oo Wasaaradda Arrimaha Gudaha asal ahaan soo xigatay walaac xagga amniga ah, haddana dadka ka shaqeeya Israel iyo Falastiiniyiinta dalxiisyada ah waxay sheegeen in tallaabadani looga gol leeyahay in laga ilaaliyo hudheelada Israa’iil oo aad uga qaalisan hudheelada ku yaal Daanta Galbeed, si ganacsigooda looga lumiyo. Ugudambeyn, qeylo dhaan shacabka ka dib, Wasaaradu waxay hakisay talaabadan, laakiin howl wadeenada dalxiiska ee labada dhinac ayaa ka walwalsan in mar kale dib loo soo daabaco.
Beytlaxam, oo leh Kaniisadda dhalashadii, iyo Yerixoo oo ah magaalada ugu da'da weyn ee la deggan yahay, waxay ahaayeen goobo caan ah oo xajka ah qarniyo. Qaska ka taagan gobolka, iyo gaar ahaan weerarada argagixiso ee ka socda Israel iyo Daanta Galbeed, waxay dhirbaaxo kulul ku reebtay dalxiiska. Dhibaatooyin isdaba-joog ah oo u dhexeeya Israel iyo Islaamiyiinta Xamaas ee Marinka Gaza, kii ugu dambeeyay ee 2014, iyo sidoo kale weeraro isdaba-joog ah oo mindiyo iyo toogasho ah 2015 iyo 2016 ayaa ka fogeeyay dalxiisayaal badan.
Waxaa jira calaamado, si kastaba ha noqotee, in dalxiisku dib u socdo. Bishii Abriil, Israa’iil waxay la kulantay tiradii ugu badnayd ee dalxiisayaal ah muddo bil gudaheed ah, iyadoo 394,000 oo dalxiisayaal ah ay booqdeen dalkaas, taas oo 38 boqolkiiba ka kordhay isla xilligii la soo dhaafay. Waxaa muhiim ah in la ogaado si kastaba ha noqotee, in xitaa Israel sanadkii ugu fiicnaa dalxiiska - 2012, oo ay la socdeen 3.5 milyan oo soo booqdeyaal ah - waa cirro marka loo eego dalalka kale ee Bariga Dhexe. Tuniisiya, tusaale ahaan, waxa ku sugnaa 4.5 milyan oo dalxiisayaal ah sanadkii 2016, in kasta oo laba xasuuq oo ay ku dhinteen tobanaan dalxiisayaal ah sanad ka hor. Sannadkii 2010-kii waxaa jiray ku dhowaad toddobo milyan oo soo booqday Tunisia.
Wax yar ka dib markii amarka lagu mamnuucayo in habeen habeen la joogo lagu dhawaaqo Beytlaxam, waxaa jiray diidmo baahsan oo ka timid bulshada dalxiiska caalamiga ah. Hawl wadeenada dalxiiska ee labada dhinacba waxay leeyihiin kooxo si wanaagsan u ballansan sanadka soo socda. Warbaahinta ayaa sheegeysa in Wasaaradda Dalxiiska Israel aan lagala tashan.
Sami Khoury, oo ah madaxweynaha hada ee Ururka Wadayaasha Dalxiiska Dalxiiska ee Socdaalka (HLITOA) ayaa u sheegay The Line Line: "Waxay ahayd (amarku) inuu saameyn xun ku yeelan doono Falastiiniyiinta oo kaliya laakiin uu ku dhici doono howlwadeenada dalxiis ee Israel." websaydhka visitpalestine.pa, oo ah goob safar oo loogu talagalay socdaalka madaxbannaan ee doonaya inuu farsameeyo khibradooda West Bank.
Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in haddii la dhaqan geliyo amarka Israa’iil uu yeelan karo saameyn ba’an.
"Dalxiisku waa halbowlaha bulshooyin badan oo reer Falastiin ah, sida Beytlaxam iyo Jericho," ayuu agaasimaha guud ee safarada Green Olive, Fred Schlomka u sheegay The Line Line. Booqashooyinka cagaaran ee loo yaqaan 'Olive Tours' waxay kooxaha u maraan labada dhinac ee Israel iyo Daanta Galbeed si ay isugu dayaan inay u soo bandhigaan martida inay eegaan labada dhinac ee isku dhaca.
Kumanaan dalxiisayaal ah ayaa u socdaala Daanta Galbeed sanad walba, Schlomka wuxuu sheegay in inta badan macaamiishiisu ay yihiin safarro xiiso leh oo xiiseynaya muuqaalka siyaasadeed iyo diineed ee gobolka.
"Waxaan runtii jeclaan lahaa inaan aado Falastiin oo aan waxbadan ka ogaado taariikhda, taariikhda qadiimiga ah ee dadyowga iyo dhaqankooda," ayay tiri Nicki Spicer oo 52 jir ah, oo ah dhakhtar qoys oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska oo soo martay adduunka, marka laga reebo Bariga Dhexe.
Spicer waxay ka baqeysaa inay booqato Daanta Galbeed waxay ka baqeysaa in loo diido inay soo gasho Israa’iil kaliya isku daygeeda inay aagga booqato. "Waxaan ka walwalsanahay in caadooyinka Israel ay ii ogolaan doonaan Falastiin hadii aan safarka galo," Spicer ayaa emailka ugu sheegay The Media Line. “Waan ogahay inaan u muuqan doonin inaan dareemayo deganaan sida aan dareemayo hadii aan qorsheynayo safar aan ku tagayo Spain.”
Socdaallada cagaaran ee Olive si toos ah ugama wargelin Wasaaradda Arrimaha Gudaha amarka. Schlomka ayaa rumeysan in go’aanka lagu daabacay amarka, inkasta oo markii dambe la qaboojiyey, uu ku lug lahaa arrimo siyaasadeed marka loo eego amniga dalxiiska. “Waa hoos u dhac ku yimid Israa’iil marka laga reebo xeerarka waddamada dimuqraadiga ah,” ayuu yiri Schlomka.
Wasaaradda Dalxiiska ee Maamulka Falastiiniyiinta ayaa ka warbixisay koror aad u weyn oo soo booqdayaasha habeenkii, iyadoo 39,700 dalxiisayaal ka badan ay habeenkii ku hoydaan Daanta Galbeed marka loo eego sanadkii ka horreeyay.
Ma jiraan tirooyin la taaban karo oo sheegaya inta dalxiis ee Israel tagta Beytlaxam maalintii.
Israel ayaa maamusha xadka ay la leedahay Daanta Galbeed, taas oo ku adkeyneysa Maamulka Falastiin inay ogaato cidda soo galeysa iyo kuwa ka baxaya iyo ujeedada laga leeyahay.
Khoury wuxuu sheegay in booqashooyinka habeenki ay muhiimad gaar ah u leeyihiin dhaqaalaha marka loo eego kuwa maalinlaha ah. Kooxaha dalxiiska ee waaweyn waxay safarro nus maalin ah ku tagi doonaan aagagga Falastiin, sida Beytlaxam, booqashooyinkan gaagaabanna, aragtida Khoury, ma siiso dalxiisayaasha wakhti ku filan oo ay ku sahamiyaan oo ay lacag ku qaataan meelaha ay booqdaan. Wuxuu aaminsan yahay in dhiirigelinta ka dambeysa mamnuucista la soo jeediyay ay ahayd mid siyaasadeed, laakiin sidoo kale dhaqaale ahayd. Way ka raqiisan tahay joogitaanka Beytlaxam marka loo fiiriyo joogitaanka Qudus, iyadoo kor u kaca dalxiis ee xilligan ka socda Daanta Galbeed, Khoury wuxuu qabaa in kororka tartanku uu siiyay Israa’iil sabab badan oo ay ku falgasho.
"(Falastiin) hadda waxay awood u leedahay inay kula tartanto qiimaha, adeegga, iyo tas-hiilaadka hudheelada Israel," ayuu Khoury u sheegay The Media Line.
Madison Dudley waa suxufiyad ardayad ah oo ka tirsan warfaafinta The Media Line